भीम रावलकाे सरकारलाई प्रश्न- नक्सा सार्वजनिक गर्न कसकाे सल्लाह खाेजेकाे? – Hotpati Media
भीम रावलकाे सरकारलाई प्रश्न- नक्सा सार्वजनिक गर्न कसकाे सल्लाह खाेजेकाे?
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार १८:५६ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
सरकारले पश्चिम लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रमाण जुटाएर लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन् ।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले भारतको नयाँ नक्सा र सरकारको आगामी कदमबारे प्रश्न गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले आफ्नो भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारले कसको अनुमति वा सल्लाह खोजेको हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले आफ्नो देशको नक्सा बनाउन सरकारलाई जोखाना हेरेर नबस्न सुझावसमेत दिए ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रावलले देशको प्रतीक चिन्हमा समेत आफ्नो भूभाग नराखेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रतीक चिन्हमा नेपालको भूभाग नराख्नेका बारेमा पनि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरे ।
सांसदहरूले नापी विभागले नक्सा सार्वजनिक नगर्दा गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।
समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भारतले सीमामा गोर्खा राइफल्ससहित थप सुरक्षाकर्मी खटाएको भन्दै नेपालले पनि सुरक्षा बल विस्तार गर्ने बताए ।
गृहमन्त्री थापाले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि झन्डै ४ सय किलोमिटर नेपाली क्षेत्र भारतले मिचेको बताए ।